चालू, पूँजीगत र विकास खर्च | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय चालू, पूँजीगत र विकास खर्च
on: June 10, 2019 सम्पादकीय
चालू, पूँजीगत र विकास खर्च
संसद्मा बजेटका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएको अभिव्यक्तिले चालू खर्च र पूँजीगत खर्चबारे नयाँ बहस सृजना गरेको छ । विकास निर्माणका काम गर्ने मन्त्रालयहरू बाहेक अन्य मन्त्रालयमा भौतिक सामग्री खरीद र तालीम आदिलाई पनि पूँजीगत खर्च मान्न सकिने उनको भनाइले बहस शुरू गरेको हो । चालू, पूँजीगत र विकास खर्चमा किन यस्तो विवाद भएको हो त ?
विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी देखिन थालेपछि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चलाई बेग्लै देखाउन थाल्यो ।
सबै चालू खर्च साधारण खर्च नहुने भन्दै सरकारी बजेटमा चालू खर्च अन्तर्गत देखाइने सवारीसाधन खरीदलाई विकास खर्च नै मान्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । कृषि विकासका लागि ब्याज अनुदान दिन र मलका लागि अनुदान दिन तथा पाठ्यपुस्तक छपाउन छुट्याइएको रकम पनि चालू खर्चमा राख्ने गरेको भन्दै यस्तो खर्चलाई साधारण खर्च भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । यसबाट चालू खर्च र पूँजीगत खर्चबारे प्रचलित बुझाइ र सरकारको बुझाइमा अन्तर रहेको बुझ्न सकिन्छ । साधारण खर्च अन्तर्गत चालू खर्च, विकास मन्त्रालय बाहेकका अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुने खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी वापतको खर्च पर्छन् । विकास खर्च भन्नाले विकास निर्माणका काम अर्थात् सडक बनाउने, विद्युत् आयोजना बनाउने जस्ता काममा हुने खर्च हो । विकास खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी देखिन थालेपछि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको खर्चलाई बेग्लै देखाउन थाल्यो । सरकारको जुनसुकै निकायले खरीद गर्ने भौतिक सामग्रीका लागि हुने भुक्तानी पूँजीगत खर्च हो यदि त्यस्तो सामग्री १ आर्थिक वर्षभन्दा बढी टिक्छ भने, अर्थात् त्यस बापत ह्रासकट्टी हुन्छ भने । यी सबैलाई विकास खर्च भनेर देखाउँदा विकास खर्च बढी देखिन्छ । यही देखाउनकै लागि सरकारले लामो समयदेखि नै पूँजीगत खर्च भनेकै विकास खर्च भन्न थालेको हो । अझ अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ अनुसार जुनसुकै मन्त्रालयले भौतिक सामग्री खरीद गरे पनि त्यो विकास खर्च नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
चालू खर्च भनेको सरकार सञ्चालनका लागि सालबसाली गरिने खर्च हो । तर, पूँजीगत खर्च भनेको १ आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय टिक्ने भौतिक सामग्री खरीदका लागि गर्ने खर्च हो । विकास खर्चले भविष्यमा लामो समयसम्म अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ । तर, सामान्य प्रशासनका कर्मचारीहरूको तालीममा हुने खर्चले यस्तो उत्पादकत्व बढाउँदैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले टेबल अथवा कम्प्युटर खरीद गर्‍यो भने त्यो पूँजीगत खर्च त हुन्छ तर विकास खर्च हुँदैन किनभने यसले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्दैन । जनताको सुविधा बढाउन तथा जीवनस्तर उकास्न दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने खर्च पनि विकास खर्च हो । १ वर्षभन्दा बढी टिक्ने र ह्रासकट्टी हुँदै जाने वस्तुका लागि गरिने खर्च पूँजीगत खर्च हुन्छ तर विकास खर्च भने नहुन सक्छ । हो, डाक्टर उत्पादन गर्न, शिक्षकको तालीम लगायतमा लाग्ने खर्च विकास खर्च मान्न सकिन्छ किनभने त्यसले मानवीय पूँजीको निर्माण गर्छ । उत्पादन क्षमता बढाउन गरिने कुनै पनि खर्च विकास खर्च हुन्छ किनभने यसले पनि पूँजी निर्माण गर्छ ।
बजेट खर्चको वर्गीकरण गर्दा विकास खर्चभन्दा बढी चालू अर्थात् साधारण खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुँदैन । नेपालमा भने विकास खर्चभन्दा चालू खर्च बढी छ । शुद्ध विकास खर्च पनि विनियोजन गरिएभन्दा निकै कम खर्च हुन्छ । अहिले चालू खर्चका विभिन्न शीर्षकलाई पनि विकास खर्च मान्नुपर्छ भन्ने आग्रह जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामकै निरन्तरता हो ।
विकास खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार्छौं, तर हामी सन्तुष्ट छौं : प्रम ओली